Hetsipanoherana sy ozona ary sarintsarim-pandevenana no nentina nankalaza ny tsingerintaona nahaterahan’ilay namolavola ny fanonganam-panjakana tao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
"Enga anie mba ho ny andro nahaterahanao no ho androm-pahafatesanao!"
Voadika ny 21 Jolay 2021 5:37 GMT
Olona mandoro vatampaty iray nandritra ny sarintsarim-pandevenana an'i Min Aung Hlaing ho fanamarihana ny faha-65 taona nahaterahany, tamin'ny Sabotsy 3 Jolay 2021. Sary sy maribolana avy amin'ny The Irrawaddy. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Lahatsoratra navoaka voalohany tao amin'ny The Irrawaddy, tranonkalam-baovao tsy miankina ao Myanmar. Ity dika nokiraina ity dia naverin'ny Global Voices navoaka, ho ampahany amin'ny fifanarahana iray ifampizaràna votoaty.
Nosoratsoratana teny amin'ireo vatampaty ny anarany nandritra ny sarintsarina fandevenana nanerana ny firenena. Niantsoantso faniriana ny hahafatesany ny olona. Hita nibanjina avy any anatin'ireo afom-pifaliana, atelin'ny lelafo ny sarin'ilay mpitarika ny fanonganam-panjakana miendrika poker tao Myanmar.
Io no fomba nentin'ny vahoakan'i Myanmar nanamarika ny tsingerintaona nahaterahan'ilay Jeneraly faratampony, Min Aung Hlaing, izay feno 65 taona tamin'ny 3 Jolay teo. Amin'ny teny hafa, io no fomba nentin-dry zareo namoahana ny fankahalàny mangotrangotraka an'ilay jeneraly noho ny nandrombahany fahefana teo am-pelatanan'ny governemanta voafidim-bahoaka tamin'ny fomba demaokratika tao amin'ny firenena, volana dimy lasa izay, sy noho ny valinkafatra feo rà nandriaka nataon'ny tafika notarihany tamin'ireo hetsipanoherana manohitra ny fanonganam-panjakana.
Nisy tanora mpikatroka tao Yangon nikarakara sarintsarim-pandevenana an'ilay Jeneraly faratampony Min Aung Hlaing ho fanoherana an'ilay mpitarika ny fanonganam-panjakana, voalaza fa feno 65 taona tamin'ny Sabotsy.
(Sary: CJ) #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/2UkZ2kxXMt
Mifanohitra amin'izay, ny 19 Jona ireo olompirenen'i Myanmar tao an-tanindrazany sy tany ivelany dia nankalaza ny faha-76 taonan'ilay mpitarika voafidim-bahoaka, ilay Mpanolotsainam-Panjakana, Daw Aung San Suu Kyi, izay gadrain'i Min Aung Hlaing hatramin'ny nisian'ilay fanonganam-panjakana.
Nifangarika tamin'ireo natao tamin'ny Sabotsy 3 Jolay ny fomba nankalazana ny an'i Aung San Suu Kyi, hoy ireo nanatri-maso. Ho an'ny fankalazana ny tsingerintaonan'ilay Mpanolotsainam-Panjakana, tsiky sy voninkazo no hita teny rehetra teny. Nivavahan'ny vahoaka ny mba hahasalamana azy sy ny hanafahana azy malaky. Tondraka saripikan'ireo olona mitafy na mivimbina voninkazo ho fanehoana firaisankina amin'ilay mpitarika azy ireo ny Facebook, mpitarika fantatra amin'ny fivimbinana voninkazo. Nisy iray nanoratra hoe: “Miverena Neny a…Efa mivelatra izao ireo voninkazon'ny Revôlisiôna.”
Araka ny voalazan'ny iray amin'ireo mpisolovava azy, tamin-kafaliana no nandraisan'i Aung San Suu Kyi ireo firariantsoa ary nisaorany ireo vahoaka nankalaza ny tsingerintaona nahaterahany sy nirary ny hanànany fahasalamana.
Ny Sabotsy teo ireo mpanao hetsipanoherana tsy manakasitraka ny fitondràna, tao Mandalay, dia nikarakara sarintsarim-pandevenana an'ilay Jeneraly faratampony Min Aung Hlaing, mpitarika ny fanonganam-panjakana
(Sary: CJ) #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/s2N9kQ2uNZ
Tamin'ny Sabotsy, ho ampahany amin'ny sarintsarim-pandevenana an'ilay Jeneraly Min Aung Hlaing, dia nametraka fikopaka teny amin'ireo toerana fiandrasana fiara mpitatitra ireo mpikatroka tao Yangon. (Fanao mahazatra ny mizara fikopaka rehefa fotoam-pandevenana Bodista). Nisy tanora nanao hetsipanoherana tselatra, nivoady ny hamaly faty ny herisetra nataony tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana.
Tao Mandalay, nisy olona nandoro vatampaty nitondra ny anaran'ilay jeneraly, niaraka tamin'ny sariny, teny an'arabe, nanompa azy sy niantso ny hahafatesany faran'izay haingana indrindra. Ny hafa nilaza fa, noho ny fahantrana nentiny tao amin'ny firenena hatramin'ny nisian'ilay fanonganam-panjakana, tokony tany am-bohoka izy dia efa tsy àry, ary ny sasany tonga hatrany amin'ny fanehoana ny fankahalàny tamin'ny alàlan'ny famaniana teo ambonin'ny sarin'ilay jeneraly.
Tao amin'ny Facebook, nandefa ny sarin'ny tenany ireo olona nitazona sorabaventy miaty ny “firarian-dry zareo ho an'ilay tsingerintaona”n'i Min Aung Hlaing. Mivaky toy izao ny iray: “Enga anie ianao ka ho faty haingana!”
Tao amin'ny faritr'i Ayeyarwady, nandefa hafatra toy izao ireo mponina: “Enga anie mba ho ny andro nahaterahanao no ho andro hahafatesanao!”
Ireo mponina ao an-tanànan'i Myaing, faritra Magwe, dia nitondra ny môtôn-dry zareo tao anaty filaharana iray izay nikarakaran-dry zareo sarintsarim-pandevenana an'ilay jeneraly mpitarika ny fanonganam-panjakana Min Aung Hlaing, ho fankalazana ny faha-65 taona tamin'ny Sabotsy.
(Sary: CJ) #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/1CzM0l0mVm
— The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) 3 Jolay 2021
Ho an'i Min Aung Hlaing sy i Daw Kyu Kyu Hla vadiny, izay malaza ho minomino foana, dia toa tsy nampahazo aina an-dry zareo ny fanehoankevitry ny vahoaka tamin'iny Sabotsy iny.
Hatramin'ity taona ity, vitsy tao amin'ny firenena no mba liana tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ilay jeneraly. Raha tsy teo ilay fanonganam-panjakana sy ny setriny feno rà nandriaka nataony an'ireo mpanao hetsipanoherana, dia tsy ho nisy akory ireo sarintsarim-pandevenana natao ho azy tamin'ny Sabotsy 3 Jolay.
Than Shwe, ilay nodimbiasan'ny jeneraly, amin'ny naha-mpanao jadona azy, dia niatrika hetsipanoherana nitovitovy tamin'izao ihany koa, saingy ireo mpikatroka tany an-tsesitany no tena nanao an'izany—fa tsy ny fandàvana manenika ny firenena toy izay mahazo an'i Min Aung Hlaing amin'izao fotoana izao.
Mifamory ao an-tanànan'i Mayangone ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fitondràna ary maniry ny hahafaty haingana ny jenaraly faratampony, Min Aung Hlaing, amin'ny fankalazana ny faha-65 taonany amin'ny Sabotsy.
(Sary: CJ) #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/E3cCDRhAES
1 herinandro izayMalezia